ဘို့စ် QC35 ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
ဘို့စ် QC35 ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါဘို့စ QC35s စုံလင်သောနေကြသည်မဟုတ်. အဆိုပါဆက်ကပ်အပ်နှံလမ်းကြောင်း Skip ခလုတ်မရှိခြင်းနှင့်အစားစက်မှုလုပ်ငန်းစံ 3.5mm တစ် 2.5mm socket ၏အသုံးပြုမှုကိုစိတျဆိုးနေကြတယ်.
ဘို့စ်ကနေအသစ် Bluetooth ကိုနားကြပ်ကိုသင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံကမ္ဘာထဲကအပိတ်ချိုမြိန်ဂီတနှင့်သင်၏စိတ်ကိုဖြည့်ပါ, ဝါယာကြိုးများဘို့လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဘို့စ် QC35 ကြိုးမဲ့နားကြပ်: ပယ်ဖျက်ရိုးရိုးပြိုင်ဘက်ကင်းဆူညံသံ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 21 ရက်ဇွန်လအပေါ်များအတွက် 2016 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဘို့စ်နားကြပ်ပယ်ဖျက်တက်ကြွဆူညံသံအဘို့ရွှေကိုစံအဖြစ်ဖွင့်ကျင်းပပြုလုပ်များအတွက်ပရီမီယံတောင်းဆိုနေကြပါတယ်. ဒါပေမယ့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီရဲ့အသစ် QC35 မော်ဒယ်နိုင်, သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး Bluetooth ကိုဆူညံသံ-ပယ်ဖျက်နားကြပ်, မျှော်လင့်ချက်မှတက်ရှငျနထေိုငျ?
အ QC25 များ၏မှန်ပုံရိပ်
အဆိုပါနားကြပ်တစ်ဦးအမှု၌လျောက်ပတ်သည်အခရီးသွားလာသို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ်တက်သည်ခေါက်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ QC35s သူတို့ကိုအတွက်အခြေခံအားဖြင့် Bluetooth ကိုအတူ QC25s တရံများမှာ, နှင့်ပြင်ပကနေသင်ရှာနေတာကိုသိမဟုတ်လျှင်ခွဲနှစ်ခုပြောပြရန်ခက်ခဲင်: လွင်ပြင်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်ငွေအရရှိနိုင်မည့်အစားနှစ်ဦး-သေံအရောင်များ - - သူတို့တစ်တွေအနည်းငယ်ကွဲပြားအရောင်နေနှင့်လက်ျာခွက်ကိုသုံးထိန်းချုပ်ခလုတ်ရှိပါတယ်, တစ်ဦးနဲ့ LED နှင့်တစ်ဦး microUSB slot ပါ.
လက်ဝဲနားကိုခွက်ကိုတစ်ဦး 2.5mm နားကြပ်ဆိပ်ကမ်းရှိပါတယ်, သောဆိုလိုသည်သူတို့အပေါ်ပယ်ဖျက်အတူသို့မဟုတ်ဆူညံသံမပါဘဲကြိုးနားကြပ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သင်ထည့်သွင်း cable ကိုအသုံးပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်သို့မဟုတ်တစ် 3.5mm 2.5mm မှ adapter ကိုဝယ်လိမ့်မယ်.
အဆိုပါ QC35s ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့တည်ဆောက်ထားခံစားရ. အဆိုပါချိန်ညှိခညျြနှောတာရှည်ခံခံစားရ, ထိပ် headband သကဲ့သို့, ဦးခေါင်းဆန့်ကျင်တဲ့ပျော့ပျောင်းသော chamois ကဲ့သို့ pad ပါအတူ pleather ဖုံးလွှမ်း. ကနားပိတ်ထားထိုင်ဒါအတွင်းပိုင်းပုံဖြစ်ပါသည်စဉ်နားခွက်ပျော့ပျောင်း-pleather pads နှင့်အတူပွငျဆငျကွနေကြတယ်.
သူတို့ကကိုယ့်အပေါ်ထားရန်နှစ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့င့်သက်သာအရှိဆုံးနှင့်ကောင်းတဲ့-to-wear နားကြပ်တချို့ရှိနေပါတယ်. သူတို့က 310g အလေးချိန်, ဒါပေမယ့်လည်းလေးလံသောမခံစားရဘူး, ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူသင်၏ဦးခေါင်းအပေါ်နေဖို့နှင့်သင်လမ်းလျှောက်လာသောအခါပတ်ပတ်လည်မရွှေ့ဘူး, သင်၏ဦးခေါင်းအပေါ်တစုံတယောက်သောသူသည်အစက်အပြောက်အပေါ်လွန်ကဲဖိအားပေးမဟုတ်စဉ်. အဆိုပါလုံးဝသူတို့ကိုထိမရှိဘဲသင်၏နားကို encapsulate, ဒါပေမဲ့ Over-the-နားကိုနားကြပ်ကြီးများသည်အအတော်လေးကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်သိမ်မွေ့များမှာ.
သူတို့ကအစသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတက်သည်ခေါက်, ခွက်သူတို့ရဲ့အတော်လေးကျစ်လစ်သိပ်သည်းကိစ္စတွင်သို့ fit မှ headband နှင့်အတူပြားချပ်ချပ် inline ခေါက်နှင့်အတူ. ခေါက်သောအခါသူတို့ကသေးသေးလေးမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ခရီးသည်ရဲ့အိတ်မှာသူတို့ကိုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေခြင်းငှါမလောက်အောင်သေးငယ်.
အဆိုပါလက်ျာနားခွက်ကိုအရာအားလုံးတတ်, ထိန်းချုပ်မှုခလုတ်နှင့်အတူ, အာဏာကို switch ကို, microUSB socket နဲ့ NFC ကိုအစက်အပြောက်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အားလုံးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပျက်ရှိရာလက်ျာနားခွက်ကိုဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာခေတ္တနား / ပြဇာတ်ခလုတ်ကို flanking အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်တရံရှိတယ်. အဘယ်သူမျှမဆက်ကပ်အပ်နှံလမ်းကြောင်း Skip ခလုတ်ရှိပါတယ်, အနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည့်, ဒါပေမဲ့နှစ်ဆသို့မဟုတ်သုံးဆနှိပ်ပြဇာတ် button ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောရှေ့ဆက်သို့မဟုတ်နောက်သို့ဆုတ် skips.
အဆိုပါလက်ျာနားခွက်ကိုလည်းအာဏာကို switch ကိုရှိပါတယ်, သောသငျသညျတွဲဖက်မှု mode ကိုသို့နားကြပ်ထားရန်တတိယရာထူးသို့တောက်, သင်ကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦးသည် iPhone အဘို့ပြုတော်မူသော. အများစုမှာ Android အသုံးပြုသူများရိုးရှင်းစွာ NFC ကိုအစက်အပြောက်အပေါ်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းကိုထိပုတ်ပါရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် - နောက်တဖန်လက်ျာနားခွက်ကိုအပေါ် Bluetooth မှတဆင့်သူတို့ကိုတွဲမှ.
စမတ်ဖုန်းများနှင့်တစ်ဦးကို PC နှစ်ခုလုံးမှ Bluetooth ကိုဆက်သွယ်မှုအားလုံးအခြေအနေများအတွက်ကျောက်ကိုအစိုင်အခဲခဲ့သည်, ငါ့ကိုပြဿနာဘဲငါအိတ်ကပ်ထဲမှာဖုန်းနှင့်အတူလမ်းပေါ်မှာ connection ကိုထွက်ဆုံးရှုံးမရှိဘဲအခန်းပတ်ပတ်လည်တွေးမိဖို့ခွင့်ပြု.
အများဆုံး Bluetooth ကိုအ QC35s တစ်ပြိုင်တည်းနှစ်ခု devices များ ချိတ်ဆက်. လိမ့်မည် headphones လိုပဲ, ဖုန်းအဘို့နားကြပ်အဖြစ်ပြုမူမည်နှင့်စမတ်ဖုန်းအပေါ် Google Now ကသို့မဟုတ် Siri ကိုသက်ဝင်နိုင်. နားကြပ်မှတဆင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးလည်းတော်တော်လေးကောင်းသည်.
လက်ဝဲနားကိုခွက်ကိုအစဉ်အလာ 3.5mm cable ကိုမှထောက်ပံ့ 2.5mm သုံးပြီးများအတွက် 2.5mm နားကြပ်ဆိပ်ကမ်းရှိပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အ QC35s အကြောင်းကိုဝေးနေဖြင့်အကောင်းဆုံးအရာကတော့ငြိမ်ဝပ်စွာနေတဲ့မကျြနှာဖုံးများကဲ့သို့ခံစားမိမှာသူတို့ကိုချပြီးသင်တို့အပေါ်မှာ wafted ပြီဖြစ်ပါတယ်, နောက်ခံ hubbub ဖယ်ရှားခြင်း, လမ်းပေါ်မှာရှိမရှိ, ရထားပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ရုံးမှာ.
ဘို့စ်ရဲ့ဆူညံသံပယ်ဖျက်နည်းပညာကို, သောမိုက်ခရိုဖုန်းကို အသုံးပြု. ဝင်လာသောအသံစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သင်တို့၏စကားကိုနားထောငျစည်တာမျိုးရှေ့တော်၌ထိုအသံသည်ထုတ်ဖျက်သိမ်းဖို့စပီသုံးပြီးပြောင်းပြန်အသံလှိုင်းပို့ပေး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဟု. ဒါဟာအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည်, ငြင်းခုံဖွယ်ရှေ့ကြွင်းသောအရာ၏အကောင်းဆုံး leagues မဟုတ်ပေမယ့်. အဘယ်သို့ငါကြိုးစားခဲ့ကြသည့်အခြားဆူညံသံ-ပယ်ဖျက်နားကြပ်ထက်မိုင် သာ. ကောင်း၏ဆူညံသံ၏ passive ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်.
ဘို့စ်ပစ္စည်းများစုပ်ယူသောအသံနှင့်အတူနားခွက်တပ်ဆင်ထား, အရာ, တက်ကြွစွာဆူညံသံပယ်ဖျက်နည်းပညာပေါင်းစပ်, မယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်, ရုတ်တရက်ပိတ်ဆို့, ချွန်ထက်သောဆူညံသံနှင့်အတူရုန်းကန်မှုများပယ်ဖျက်ကြောင်းအသံ.
ပြင်ပကမ္ဘာမှသင်တို့ကိုသီးခြား၏သက်သက်အာဏာယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်မကောငျးနားကြပ်ရှိပါတယ်, မဟုတ်ရင်ကြိုးမဲ့သို့မဟုတ်, ကင်း QC25s မှ.
နားခွက်အဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြင်ပကမ္ဘာမှမြတ်သောအထီးကျန်မှုတွေပေး. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အထီးကျန်မှုတွေ၏ဂုဏ်အသရေဂီတကိုတကယ်ဆိုအသံအတိုးအကျယ်မှာသီခငျြးဆိုနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တသမတ်တည်းအများကြီးနိမ့်ကျ volumes မှာ, ငါ့ဂီတကိုနားထောငျတှေ့ရ, ငါကြား၏အသက်ရှည်ဘို့ကောင်းသောအရာကိုအရာဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါနားကြပ်ကြီးမြတ်အသံ. အချို့လူများက Bose ထုတ်ကုန်သံလမ်းကိုမကြိုက်ဘူး - တဲ့ "ဘို့စသောအသံ" ကျိန်းသေလည်းမရှိ - ဒါပေမဲ့သူတို့ကြီးမြတ်ချိန်ခွင်လျှာများ, ကောင်းသောဘေ့လိုအပ်သောအခါအသံများနှင့်တူရိယာများအကြားအလွန်ကြီးစွာသောခွဲခြာ. သူတို့က 300 ကို wired နားကြပ်£ audiophile-grade ကိုအစုတခုအဖြစ်ကောင်းသောအသံမပါဘူး, ဒါပေမယ့်လူအများစုကသူတို့ကိုခစျြလိမျ့မညျ.
သူတို့ကဆက်ဆက်စည်းချက်သံတရံမဟုတ်, တွန်းလျှင်မူကားအမှန်တကယ်အတော်လေးနက်ရှိုင်းသောဘေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်. အများဆုံးအထင်ကြီးအရာပယ်ဖျက်တက်ကြွစွာဆူညံသံအသံအရည်အသွေးအထိခိုက်မပါဘူးဖြစ်ပါတယ်,များစွာသောအခြားအလားတူနားကြပ်ပေါ်မတူဘဲ.
အ QC35s အပေါ်ကို Bluetooth နှင့်အတူလေယာဉ်ခရီး၏ပင်အရှည်ဆုံး outlast လိမ့်မည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ QC35s ပတ်ပတ်လည်ကျဆင်းနေမျှော်လင့်အထိနေထိုင်ခဲ့ 5% ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့သော Bluetooth ကိုကျော်ကိုနားထောငျ၏တစ်နာရီလျှင် 20 Bluetooth ကိုကျော်ကိုနားထောငျရသောအခါစွဲချက်အကြားနာရီ, နှင့်ကြာကြာကြိုးဆက်သွယ်မှုများကိုကန့်သတ်မယ်ဆိုရင်. အဖြစ်ကြာမြင့်စွာစွဲချက်အကြားဘို့စ်အဖြစ်ကြာရှည်များစွာကိုအားပြန်သွင်းနိုင်ကြိုးမဲ့ဆူညံသံ-ပယ်ဖျက်နားကြပ်ရှိပါတယ်မဟုတ်.
ဘက်ထရီသက်တမ်းရှည်အောင်ကူညီပေးသည်နှင့်ငါးမိနစ်သကဲ့သို့အနည်းငယ်သို့မဟုတ်သုံးနာရီလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ထားတဲ့ Auto-standby လည်းရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်လုံးဝပိတ်ထား. standby မှနိုးထဖို့သင်ရုံခလုတ်တယောက်တွန်းရန်ရှိသည်.
တန်ခိုးကားထည့်သွင်း cable ကိုသုံးပြီးထွက်ပြေးလာသောအခါထိုနားကြပ်ကိုအသုံးပြုခံရဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အတော်လေးအဖြစ်ကောင်းသောအသံမပါဘူး. သူတို့ကအပြည့်အဝ microUSB ကနေတဆင့်အားသွင်းဖို့ပဲကျော်နှစ်နာရီယူ.
အဆိုပါ 2.5mm နားကြပ်ပေါက်ကိုစိတျဆိုးသည် - သင်ရုံအတွက်မဆိုအဟောင်းနားကြပ် cable ကို plug မနိုင်ကိုဆိုလိုသည်
တစ်ဦးကဆက်ကပ်အပ်နှံထားအာဏာကို switch ကိုများအတွက်ပါဝါခလုတ်ကျင်းပရန်ရှိခြင်းထက်အများကြီး သာ. ကောင်း၏5သို့မဟုတ်ပိတ်ကြောင့်ပြောင်းစက္ကန့်
အဆိုပါနားကြပ်ဘက်ထရီရာခိုင်နှုန်းနှင့်ကို start up နှင့်စက်ကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်သောအခါသို့မဟုတ်စကားသံစာသားကို အသုံးပြု. disconnect အပေါ်ချိတ်ဆက်ထုတ်ကုန်ကြေညာသငျပွောဆို
အဆိုပါအမျိုးသမီးအင်္ဂလိပ်စကားသံကိုအနည်းငယ် flirtatious အသံလှုံ့ဆော်, ဂဏန်းသို့မဟုတ်အက္ခရာရဲ့အဆုံးမှာအနည်းငယ် uptick နှင့်အတူ, သောက၎င်း၏တစ်ဦးမျက်တောင်ခတ်ပြီးအပြုံးနှင့်အတူပြောပါတယ်တူနီးပါးအသံ
သူ၏အသံတချို့စပ်စုရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည် - ထို OnePlus ပူးတွဲ3စမတ်ဖုန်းတစ်ဦးချင်း-N-E ကိုအဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်ပေါင်းသုံးခဲ့သည်
တစ်ဦးရှိပါတယ် Android မှာ/iOS ကို သငျသညျအတူတွဲထားသောကိရိယာများကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ခွင့်ပြုထို app, စကားသံကိုညွန်ပြပိတ်, သင့်ရဲ့နားကြပ်၏နာမတျောကိုပြောင်းလဲနှင့် Auto-standby timer နေရာမှာစီမံခန့်ခွဲ
အဆိုပါဘို့စ QC35 £ 290 ကုန်ကျ, သောသူတို့အား£ 40 ကြိုးတပ် QC25 ထက်ပိုစေသည်, ထိုထက်£ 160 ထက်ပို Philips က SHB9850NCs, ထိုထက်£ 100 ကိုပိုပြီး Plantronics နောက်ခံ beats တွေကို Pro ကို, ထိုထက်£ 70 ကပို ကြိုးမဲ့ NC အပေါ် Sony က h.ear နားကြပ်, ထိုထက်ဒါပေမဲ့£9စျေးနှုန်းချိုသာ Zik ကြက်တူရွေး 2.0 နားကြပ် ထိုထက်များနှင့်£ 90 စျေးနှုန်းချိုသာ Sennheiser အရှိန်အဟုန်ကြိုးမဲ့.
သို့သော်သူတို့အားသေးငယ်တဲ့ niggles ဝေးပေးရနေကြတယ်ပေမယ့်စိတ်ကူးဆူညံသံပယ်ဖျက်နှင့်အထီးကျန်မှုတွေ, သက်သာခြင်းနှင့်မြတ်သောသံကို. သူတို့က Non-ဖက်ရှင်နားကြပ်ဘို့စျေးကြီးပါတယ်, သူတို့သည်သင့်ဒေါက်တာ Dre တူအောင်မပြုစေခြင်းငှါ, သငျသညျအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်အခက်အခဲရှိလျှင်ဒါပေမဲ့သူတို့တိုင်းတစ်ပြားရကျိုးနပ်ပါတယ်, တစ်ပွင့်လင်းအစီအစဉ်ရုံးအတွက်အာရုံစူးစိုက်ရုန်းကန်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုပျံသန်းသို့မဟုတ်ပဲငြိမ်းချမ်းရေးတစ်နည်းနည်းချင်နှင့်သင့်အသက်တာ၌ဆိတ်ငြိမ်.
အဆိုပါဘို့စ QC35s နားကြပ်ပိုက်ဆံပယ်ဖျက်ဆူညံသံအခုအချိန်မှာဝယ်နိုင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း, လွန်းနဲ့ငြင်းခုံဖွယ်အကောင်းဆုံးအဘလူးတုနားကြပ်. သူတို့ကတောက်ပနေ. ငါတို့သည်သူတို့အဘို့ဤမျှကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်အဘယ်ကြောင့်, မပြောတတ်ဘူး.
အကောင်းအဆိုး: အကောင်းဆုံး-In-class ကိုဆူညံသံပယ်ဖျက်နှင့်အထီးကျန်မှုတွေ, အလွန်ကြီးစွာသောဘက်ထရီသက်တမ်း, အလွန်ကြီးစွာသောအသံသည်, အဆင်ပြေ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ခေါက်, ဘလူးတုသ်, NFC ကို, လျောက်ပတ်သောစီမံခန့်ခွဲမှု app ကို
Cons: 2.5မီလီမီတာနားကြပ်ဆိပ်ကမ်း, အဘယ်သူမျှမဆက်ကပ်အပ်နှံလမ်းကြောင်း Skip ထိန်းချုပ်မှု
လက်ငင်းတွဲဖက်မှုအဘို့သင့်ကိုဖုန်းနှင့်အတူ NFC ကိုသင်္ကေတကိုအသာပုတ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ကြိုးမဲ့ NC နားကြပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်အပေါ် Sony က h.ear: တကယ်ကြီးမြတ်၏ဖွင့်ရှက်တတ်
Zik ကြက်တူရွေး 2.0 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: Philippe Starck ကဒီဇိုင်းကြိုးမဲ့နားကြပ်
အထဲကအကောင်းဆုံးဆူညံသံ-ပယ်ဖျက်နားကြပ်ခြောက် 2014 အအသွားအပြန်နှုတ်ပိတ်ဖို့
အထဲကအကောင်းဆုံးကို Bluetooth နားကြပ်ငါးခု 2015 ကေဘယ်ကြိုးတွေအခမဲ့ချိုးဖျက်ဖို့
အပိုဒ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်တေးဂီတနှင့်အသံ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, နားကြပ်, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, နည်းပညာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ
← အရိုးပွရောဂါမူးယစ်ဆေးများကအဆက်မပြတ်ရင်သားကင်ဆာဆဲလ်ကြီးထွားမှု $4 အိန္ဒိယစမတ်ဖုန်း 'ဤအပတ်ပို့ဆောင်ထားမည်’ →